नयाँ पुस्ताले सुगौली सन्धियता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता÷सार्वभौमिकता÷भौगोलिक अखण्डतामा लागेको घाउको उपचार गर्न प्रयोग गरेका दुई भिन्न विधिबारे बुझ्नु राम्रो होला । पहिलो, डाक्टरी वा वैज्ञानिक विधिः क) देशका सबै जाति÷क्षेत्र÷समुदायबीच समानताका आधारमा बलियो आन्तरिक एकता कायम गर्ने; ख) १९५० को सन्धि, सीमा, पारवहन आदि समस्या ईपीजी र उच्च स्तरीय वार्ताबाट सदाका निम्ति हल गर्ने । दोस्रो, धामीझाँक्री विधिः क) निरंकुश शासकले बलपूर्वक आन्तरिक कृत्रिम एकता कायम गर्ने; ख) सार्वजनिक खपतनिम्ति बाहिर चर्का कुरा गर्ने, भित्र लत्रिने र कहिल्यै समस्या हल नगर्ने । केपी ओली र बाबुराम भट्टराईबीच मुख्य फरक यही !
भौगोलिक अखण्डताको सवालमा पनि जाति, क्षेत्र, समुदायको आन्तरिक एकता खोज्नु भनेको कसैको मनभित्र रहेको कुण्ठालाई सम्बोधन होस् भन्ने चाहना मात्रै हो । घरमा आगो लागेको बेला सबै सदस्यको ध्यान पानीमा हुन्छ, सलाईको काँटीमा होइन ।
भारतको आश्रय र राजनीतिक छहारीमा बसेर नेपालमा ‘युद्ध’को नेतृत्व गरेका कसैले पनि कृपा गरेर देशभक्तिको गीत नगाऔँ । त्यो कर्कश आवाजले थुप्रै निर्दाेषहरूको आत्माको शान्ति खलबलिन्छ ।
भनिन्छ नि, यो मामलामा बीपीले पनि गल्ती नै गरेका हुन् । शत्रुदेशमा बसेर आफ्नो मातृभूमिउपर युद्ध गर्दा आश्रय दिनले अपमान गर्छ नै । पछि उनी पनि अपमानित हुनुप¥यो । इतिहास यसै भन्छ । सम्बन्ध प्राकृतिक हुनु उत्तम !
साँच्ची ‘राष्ट्रवादी’को लाइसेन्स कहाँ पाइन्छ ? बालुवाटारबाट ओलीले नै बाँडिराछन् कि बालकोटबाट गोकुल बाँस्कोटाले ?
स्मार्टवाला भए ट्याम लाग्छ । अहिलेलाई राष्ट्रवादी ट्वीट देखाए पुग्च । छड्के (मापसेजस्तै) चेक गर्दा ह्वास्सै राष्ट्रवाद गनाउन परो ।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नु एकदम उचित, पूर्ण समर्थन ! तर, अहिले नै संविधान संशोधन अलि हतार हो कि ? दुवैले वार्ता यसको एक मात्र हल भनिरहेको स्थितिमा भोलि वार्ता राम्रै भएर नयाँ नक्सा हल्का फेरियो भने फेरि संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान र राज्यको निशान बारम्बार फेरिनु राम्रो हैन ।
असल कामको लागि जतिपल्ट फेरे पनि खासै फरक पर्दैन तर सम्बन्धित पक्षले पनि हरियो बत्ती बलेको मनसाय त देखाउनुप¥यो । राजनीतिमा अलिकति कमजोरी देखाए भने पेल्ने बलियोले !